English Speaking Basics (10) အင်္ဂလိပ်စကားပြောအခြေခံများ (၁၀) ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
English Speaking Basics (10) အင်္ဂလိပ်စကားပြောအခြေခံများ (၁၀)
Author: lu bo | 10:32 PM | No မှတ်ချက် | ‎Win Naing Oo‎ to အင်္ဂလိပ်စာစိတ်ဝင်စားသူများ
I FEEL LIKE + (VERB-ING) …………………………………….. ကျနော်တို့ ရင်ထဲမှာ ဖြစ်ချင် လုပ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်စုံတစ်ရာ (adesire to do something) ပေါ်လာတဲ့အခါ အဲဒါကို ဖေါ်ပြချင်တဲ့အခါ ဒီပုံစံကို သုံးနိုင်ပါတယ် . (1) I feel like talking. ကျနော် စကားပြောချင်တယ် (2) I feel like dancing. ကျနော် ကချင်တယ်
(3) I feel like going to the beach. ကျနော် အပန်းဖြေ ကမ်းခြေကို သွားချင်တယ် (4) I feel like going forawalk. ကျနော် လမ်းလျှောက်ထွက် ချင်တယ် (5) I feel like havingasnack. ကျနော် မုန့်စားချင်တယ် (6) I feel like watching TV. ကျနော် ရုပ်မြင်သံကြား ကြည့်ချင်တယ် (7) I feel like having friends on Facebook. ကျနော် Facebook မှာ သူငယ်ချင်းတွေ ရချင်တယ် (8) I don't feel like leaving. ကျနော် ထွက်မသွားချင်ဘူး (9) I don't feel like explaining. ကျနော် ရှင်းမပြချင်ဘူး (10) I do not feel comfortable talking about it. အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရတာ စိတ်သက်သက်သာသာ မဖြစ်ဘူး (စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ရတယ်) (11) I do not feel like we are going in the right direction towards democracy.
ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီဆီကို မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာ သွားနေတယ်လို့ မခံစားရဘူး (ဒီဝါကျမှာက ဘာကြောင့်လို့ သေချာ ပြောမပြတတ်ပဲ ခံစားရတာမျိုး ) ……………………. I feel like.. နဲ့ I want to .. ရဲ့ကွာခြားချက်ကို ရှာကြည့်တော့ ဒီလိုတွေ့ထားပါတယ် .
I feel like.. က ခံစားချက်ကို ပြောချင်တာဖြစ်တယ် ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ထည့်စဉ်းစားမျိုး မဟုတ်ဘူး ၊ စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့ ဆန္ဒကို ဖေါ်ပြတာပဲဖြစ်တယ် ။
ခံစားမှု feeling ကို အသားပေးချင်တဲ့အခါ သုံးမယ် ။ I feel like being an artist. ကျနော် အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ် (အနုပညာကိုချစ်လို့ ၊ ဒီအလုပ်ကို လုပ်ဖြစ်ချင်မှလုပ်မယ်) . I want to .. ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖေါ်ပြတာဖြစ်တယ် ၊ နှလုံးသားကခံစားချက်ဆိုတာထက် ဦးနှောက်စဉ်းစားမှုအရ လုပ်ချင်တာဖြစ်တယ် .. I want to beabusiness man. ကျနော် စီပွားရေးသမားတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ် (ပိုက်ဆံများများသုံးလို့ရမယ်လေ) . နှလုံးသားအတွက်ဆို feel ၊ ဦးနှောက်အတွက်ဆို want လို့ လွယ်လွယ် သိလိုက်ပါ .. …………… ဆန္ဒ တစ်စုံတရာ ပေါ်လာတဲ့အခါ ပြောလို့ရသွားပြီပေါ့ . မေတ္တာဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေပါ Facebookသို့ Twitterသို့ Google+သို့ Stumbleသို့ Diggသို့